FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA DAUG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Daug
Alika mifangaro Dachshund / Pug mifangaro
Sabian the Daug (Dachshund / Pug mix) amin'ny 2 taona sy 18 pounds (reny, Dachshund ary ray, Pug) - hoy ny tompony, 'Tena tia milalao izy ary TIA milentika. I Sabian no alika tsara indrindra hitako sy nananako, ary manao zavatra toa ny fantany ihany koa izy. Izy dia mpiambina tsara, tia ankizy ary mifanerasera tsara amin'i Max alika hafa, izay Bulldog anglisy. Mba ampiana fotsiny, ity sary ity dia tsy manome rariny azy. Ny vatany dia misy hozatra ary mifandanja tsara, tsara tarehy tokoa izy! '
Ny Daug dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Dachshund ary ny Pug . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Sabian no Daug, fifangaroan'ny Dachshund / Pug. Amin'ity sary ity dia 3 taona sy tapany izy ary 18 lbs ny lanjany. Tena milalao, tsy mivadika i Sabian ary tia misolelaka sy mijery fahitalavitra (miaraka amin'izay). Tena mahafatifaty izy dia antsoiko azy ho 'sangan'asa fototarazo.' Sabian dia 'daug' marobe ao anaty fonosana kely. '
Astro the Daug amin'ny 1 taona - Pig no mainty ny dadany ary Dachshund ny rainy. 'Astro no alika kely tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Nahazo azy aho tamin'izy 8 herinandro. Samy raiki-pitia taminy izahay mivady tamin'ny fotoana nahitanay azy. Tiany ny teddy raha vantany vao tonga any an-trano isika dia mihazakazaka miarahaba antsika amin'ny teddy ao am-bavany, manetsiketsika ny rambony toa hianjera! Astro dia mibaiko ny vavony. Hipetraka izy, hihodinkodina, hilalao faty, hiteny azafady araka izay ataony amin'ny sary, matory, manao fika kely maro hikarakarana sy izay rehetra tadiaviny. '
Astro the Daug (Dachshund / Pug mix) amin'ny 1 taona
Astro the Daug (Dachshund / Pug mix) amin'ny 1 taona— 'Inona no anananao, Neny ?!'
Sam the Daug amin'ny 7 volana (Dachshund / Pug mix)
boston terrier sy chihuahua mifangaro alika kely
Zoë the Daug (Dachshund / Pug mix dog) alika kely tokony ho 8 herinandro— 'Zoë, zanako vavy Daug efa ho 8 herinandro (Dachshund / Pug mix) ny reniny dia Pug kely bitika ary ny raim-pianakaviana dia Dachshund somary lavalava. Izy no kely indrindra amin'ny fako (nisy telo). Tena liana te hahafanta-javatra sy sariaka toy ny reniny izy, nefa tia matory sy mifampikotraka am-pofoana toa ny rainy. '
Zoë the Daug (Dachshund / Pug mix karazany) alika kely tokony ho 8 herinandro
sarin'i puggles efa lehibe
mixer spaniel basset hound springer
buta maso mastiff feno lehibe